आफूभन्दा झण्डै १० वर्षले जेठा युवकसँग प्रेममा परिन पूर्वराजकुमारी पूर्णिका शाह, यी हुन् उनका प्रेमी ! « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २५ असार २०७७, बिहीबार १९:१३
छोरी हुर्किइन् । एउटा वर खोज्ने भइन् । गोप्य राखे पनि बर पाएकीमात्र छैनन्, प्रेमको उत्कर्ष छ । प्रसंग हो, पूर्वयुवराज पारस शाहको । उनका तमाशाहरु देख्दा र सुन्दा लाज लाग्नेखालका छन् । तर, पत्नी र छोरीहरु सभ्य र सामाजिक छविका साथ देखिँदा प्रशंसकहरुको ताँती छ । ठूली छोरी पूर्णिका हुन्, अहिले भर्खर–भर्खर आफूभन्दा झण्डै १० वर्षले जेठा युवकसँग प्रेममा परेकी ।
पूर्णिका सामाजिक सञ्जालका प्रस्तुतिहरुको कारण युवामाझ आफूमात्र लोकप्रिय भइनन्, लकडाउनको बेला टिकटक ट्रेण्डमा आमा र बहिनीसहित सहभागी हुँदा निक्कै फ्यान बटुलेकी छन् । उनीहरुले धरानका पत्रकार गोपाल देवानको शव्दमा गायक सविना राईको गीत ‘गुराँशको फेदमुनि सम्झनाको छायाँ’ मा दिएको प्रस्तुति पूर्णिकाकै अकाउण्टबाट पोष्ट भएको थियो । फलतः फेसबुकमा ५६ हजार फ्यान हासिल गरेकी छन् । उनै पूर्णिका आफूजस्तै अन्यायमा परेको एउटा परिवारका सदस्यसँग गहिरो मायामा डुबेकी हुन् । उनले आफू गहिरो प्रेममा परेको कुरा त सार्वजनिक गरेकी छन् । तर, जनआस्थाले फेला पारेको छ, ती प्रेमी ।
उनी हुन्, श्रीपेच धारण गर्ने नेपालका पहिलो र ब्रिटिशले पनि पहिलो प्रधानमन्त्री स्वीकारेका मुख्तियार माथवरसिंह थापाका सन्तान । वि.सं १८७१–७३ को नेपाल–अंग्रेज युद्धका कमाण्डर माथवरसिंह थापाकै सन्तान हुन्, नेपाल प्रहरीको एआइजीबाट ०७३ सालमा रिटायर्ड भएका सुशीलबरसिंह थापा र त्यही बेला नेपाली सेनाको लेफ्टिनेन्ट कर्णेलको पाँच वर्षे पदावधि लागेर अवकाश पाएपछि सेभ दि चिल्ड्रेनमा कार्यरत राजीवबरसिंह थापाहरु । पूर्णिकाका प्रेमीचाहिँ सुशीलबरसिंहका छोरा, राजीवबरसिंह र नम्रताका भतिजा धर्म हुन्, धर्म । सुशील र राजीव १३ दिने दाजुभाइ हुन् ।
पूर्वराजकुमारी पूर्णिका शाह
थाइल्याण्डमा अध्ययन गर्ने क्रममा पूर्णिकाले धर्मलाई भेटेकी थिइन् । काठमाडौंको भोटेबहाल पुख्र्यौली थलो भई अहिले विभिन्न ठाउँमा छरिएर बस्ने बरसिंह थापा खलक पहिलादेखि नै शाही परिवार नजिक छ । तर, पूर्णिका र धर्मको भेट यसरी भएको होइन । सबै कुरा आमा हिमानीसँग शेयर गर्ने बानी भएकी उनले धर्मसँगको सम्बन्धबारे थाइल्याण्डमा हुँदै आमालाई सुनाएकी थिइन् । बुझ्दै जाँदा पत्ता लाग्यो, राम्रो परिवारको सदस्य भन्ने कुरा ।
धर्मको पारिवारिक विरासत राम्रो, तर काका–बाबुचाहिँ अन्यायमा परेका । बाबु सुशीलबरसिंह थापा प्रहरीको डिआइजी हुँदा आफ्नै व्याची उपेन्द्रकान्त अर्यालको विशेष स्नेहमा कमी भई तलैबाट गलहत्याइएका । यादव अधिकारीहरुसँगै मुद्दा लिएर सर्वोच्च गए । त्यहीँको आदेशले एआइजीको फुली लगाए, तीन महिना हाजिर गरेर रिटायर्ड भए । काका राजीव स्टाफ कलेज गरेका, तालिमहरुका टप फाइभमा पर्ने, राम्रा मान्छे । तर, माथि दरबन्दी खालि हुँदाहुँदै लेफ्टिनेन्ट कर्णेलको पाँच वर्षे अवधीबाट रिटायर्ड भए ।
धर्म सानातिना ठेक्कासहित जमिन र बिल्डिङ बेचबिखनको काम गर्छन् । प्रायः दरबारमार्ग, ठमेल र लाजिम्पाटतिर उनीहरुको जमघट भइरहन्छ । रमाइलो कस्तो छ भने, कतिपय डेटिङमा आमा हिमानी पनि साथ हुन्छिन् । पूर्णिका निकट एकजना साथीले जनआस्थालाई सुनाइन्, ‘करिव एक वर्षअघिको एउटा जमघटमा त हिमानी छोरीका प्रेमीसँग मज्जाले नाचिन्, त्यसबेला पूर्णिका ताली बजाइरहेकी थिइन् ।’ उता, बाबु पारसको खबर भद्रगोल छ ।जना आस्थाले यो खबर छापेको छ ।
एकजना युवतीसँग प्रेममा रहेका पारस पछिल्लो समय पोखरातिर बस्न थालेका थिए । काठमाडौं नफर्किने बाचा थियो । तर, असारको १९ गते धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा ‘इनफ इज इनफ’ अभियान चलाएर अनसन बस्ने इञ्जिनियर इशान अधिकारीलाई भेट्न पुगे । जनताको जीवन रक्षाका निम्ति कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारबाट प्रभावकारी व्यवस्थापनको माग गर्दै बसिएको उक्त अनसनमा सहभागी इशान हुन्, तनहुँ घर भएका, पारसको कुटाई खाएर नेपाली सेनाको मेजरबाट जागिर छाड्ने ईश्वर अधिकारीका छोरा हुन् ।
सामाजिक अभियन्ता तथा वरिष्ठ कर प्रशासक स्व. भीमबहादुर अधिकारीका नाति । राणाकालदेखि जागिर खाएर कर व्यवस्थामा निपूर्णता हासिल गरेका भीमबहादुर झण्डै सय वर्ष बाँचेर केही समयअघि दिवंगत भएका थिए । उनलाई सरकारले अवकासपछि पनि करारमा जागिर लगाएको थियो । रमाइलो के छ भने, ईश्वर अधिकारी दरबार हत्याकाण्डताका सैनिक प्रहरीमा थिए, त्यहीँबाट शाही रक्षकमा खटिएका ।
पारसले मदिराको नशामा बबाल गरेपछि तत्कालिन युवराज दीपेन्द्रले ‘बाँधेर ल्याउनु’ भन्ने आदेश दिएका थिए । आदेशानुसार पारसलाई दीपेन्द्र भएको ठाउँमा लैजान खोज्दा ईश्वरले पिटाइ खाए । दरबार हत्याकाण्ड भएकै साल (०५८ असोज) पारस युवराज घोषित भएपछि ईश्वर जागिर छाडेर अमेरिका छिरे । उतै हुँदा नेपालमा रहेकी पत्नी छायाँ चन्द (हालै दिवंगत कलाकार जयनन्द चन्दकी छोरी) रजनिश भक्त विवाहित झापालीसँग गएकी हुन् । पत्नीले छाडेर सेन्ट जेभियर स्कुल पढ्ने दुई छोराको बिजोग भएपछि ईश्वर स्वदेश फर्किएर बनस्थली चोकभित्र घर बनाई सानो ग्रोसरी दुकान खोली बसेका छन् । यिनै ईश्वरलाई गत साता पारसले अस्पतालको प्रांगणमा भेटी हात समातेर छोराको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेकी सर्मिला वाइवाले कृष्णबहादुर बोहोराको ह त्या गर्ने कल्पना मुडभरी
गोंगबु घटनामा नयाँ ट्विस्ट: अ’श्लि’ल फोटो हैन ५० लाख रुपैया हो घटनाको कारण, यि महिलाले खोलिन् सबै सबै रहस्य (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । कृष्णबहादुरले बहिनी भन्ने एक महिलाले उनको ह त्या प्रेम सम्बन्ध र अ’श्लि’ल तस्बिर
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, श्रावण २८ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल श्रावण २८ गते बुधबार इश्वी सन २०२० अगस्त १२
कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि सरकारले थप कडाइ गर्दै लगायो फेरी यस्ता नियम, अब के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ?
काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिँदै गएको भन्दै आगामी भदौ ३१ गतेसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट
२७ श्रावण २०७७, मंगलवार २०:५४
गायक निशान भट्टराईले गरे प्रेमिकासँग विवाह
रुसले बनायो कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप
२७ श्रावण २०७७, मंगलवार १९:०२
२७ श्रावण २०७७, मंगलवार १७:५०